कपाल झर्न नदिन पुरुषले के गर्ने ?- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
कपाल झर्न नदिन पुरुषले के गर्ने ?
काठमाडौँ — पुरुषमा कपाल झर्नु आमसमस्या हो । ५० वर्ष माथिका ८५ प्रतिशत पुरुषमा कपाल झरेर पातलिन थाल्छ तर अचेल युवाहरुमा पनि कपाल झर्ने समस्या देखिन थालेको छ ।
टोपी लगाउँदा, धेरै कपाल कोर्दा, थरीथरीका स्टाइल बनाउँदा कपाल झर्ने गर्छ भन्ने भ्रम छन् तर ती होइनन् ।
कपाल झर्नुका विविध कारणहरु हुन सक्छन् जस्तै खानपान, मिनिरलको कमी, औषधि, तनाव, प्रदूषण, वंशाणुगत समस्या आदि । कपाललाई कहिल्यै नझरोस् भनेर रोक्न त सकिन्न तर यसका उपचार र समाधान छन् जसले कपाल झर्न कम गराउन सक्छन् । कपालका सौखिनलाई कपाल प्रत्यारोपण र लेजर ट्रिटमेन्टको सुविधा पनि रहेको छ ।
कपाल झर्नबाट रोक्न के गर्ने?
- आइरनको कमी, भिटामिन बी कम्प्लेक्स तथा प्रोटिन तथा भिटामिन डी को कमीले कपाल कमजोर बनाउँछ ।
- मद्यपान तथा धुमपानको कम सेवन गर्नुहोस् ।
- बेला बेलामा कपालको मसाजले पनि कपालको जरा बलियो पार्छ ।
- सन्तुलित भोजन गर्नुपर्दछ । खानामा प्रोटिन, फाइबर, फलफूलको सेवनले कपाल बलियो बनाउँछ ।
- तनावले पनि कपाल झर्ने गर्दछ । त्यसैले तनाव कम गर्ने र ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । योगले तनाव मात्र घटाउँदैन यसले हर्मोनको गडबडी हुन दिँदैन र कपाल झर्नबाट रोक्छ ।
- पानीको सेवन बढी गर्नुपर्छ । कम्तीमा दिनमा ४ देखि ८ कप पानी खाने गर्नुपर्छ जसले गर्दा कपाल बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
- पटक-पटक कपालमा कलर गर्ने र केमिकल ट्रिटमेन्टले कमजोर बनाउने गरेका छन् त्यसैले त्यसको प्रयोग कम गर्ने ।
- नियमित शारीरिक व्यायाम गर्न आवश्यक छ । दैनिक आधा घण्टा हिँड्ने वा पौडी खेल्दा पनि हर्मोन लेभल सन्तुलन भइरहेका हुन्छन् र कपाल झर्नबाट रोक्न सक्छ ।
प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ १६:०३
देशैभर एमालेसँग प्रतिवाद नगरी चुनाव जितिँदैन : दाहाल
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष दाहालले एमाले नेता, कार्यकर्तालाई जाली, फटाहाको संज्ञा दिँदै उनीहरुको प्रतिवाद नगरी आगामी निर्वाचन जित्न नसकिने निष्कर्ष समेत सुनाए ।
पार्टीको सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समितिले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले एमाले गणतन्त्र, संघीयताविरोधी रहेको भन्दै अबको डेढ वर्ष जनतामा जान पनि पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराएका हुन् । दाहालले आफ्ना पार्टीका लडाकु कार्यकर्तामाथि एमालेले आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो गरियो भने आफ्नो पार्टीले एमालेविरुद्ध देशभर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
‘केपीको हातमा नेतृत्व छ र उनले फेरि एकचोटी माओवादीलाई सखाप गर्ने रणनीति लिएका छन् । उनले डेढ वर्षभित्र हामी सरकारमा जान्छौं भनेका छन्,' उनले भने, 'देशैभर एमालेसँग प्रतिवाद नगरी चुनाव जितिँदैन । यी जाल फटाहाहरुले अहिले हामीलाई हेप्न खोजेका छन नि ! तिनको सातो खाने ।'
'पहिले आयो है माओवादी भनेपछि जाली, फटाहा थर्ररर हुन्थे । छाती खोलेर भन्नु ओलीले ल्याएको होइन गणतन्त्र, हामीले बनाएको हो संविधान । यिनीहरु विरोधी हुन् भन्दै हिँड्नुहोस् । पार्टी कमिटी बनाउनुस्, जनतामा जानुस् । को बेइमान हो बुझाउनुस् । डेढ वर्ष आँखा चिम्लेर मिहिनेत गरौं । यो देश हामीले बचाउनु पर्छ, गणतन्त्र हामीले बचाउनु पर्छ । देशको रक्षा गर्नु पर्छ’दाहालको भनाइ थियो ।
दाहालले केपी ओलीले छलकपटको बाटो लिएपछि उनीविरुद्ध पार्टी हेर्डक्वाटरमै बमबारी गर्नु परेको दोहोर्‍याए । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले धेरै दुःख गरेको स्मरण गराए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा विजयी भएसँगै आफू खुसी भएको प्रतिक्रियासमेत दिए ।
प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ १६:०२